Maitiro ekuziva kuti yakawanda sei yemahara nzvimbo yandinayo pane iyo iPhone | IPhone nhau
Maitiro ekuziva kuti yakawanda sei yemahara nzvimbo yandinayo pane iyo iPhone
Zvichienderana nenzvimbo yekuchengetera mudziyo wedu, zvingangoita kuti zuva rega rega iOS inotiratidza inofara nzvimbo yekuchengetera, iyo inotimanikidza kuti tiongorore, rimwezve zuva, anova mafomu atakaisa pane yedu kifaa, ku Tichaona kana tikakwanisa kuwana imwe nzvimbo nekudzima.
Makore mashoma apfuura, Apple yakatanga iyo base modhi ine 16 GB yekuchengetedza memory, nzvimbo yekuchengetera iyo kana isu tikangodzora nzvimbo inogara neanoshanda system, hatina kusiiwa nechinhu chiri pasi pe12 GB. Neraki, izvo zvakachinja makore mashoma apfuura, hushoma huwandu hwekuchengetedza uri 32 GB.
Nekusvika kweiyo iPhone X, Apple yakatanga kupa 64GB shoma nzvimbo, inokwana nzvimbo yakakwana yekugona kunetseka nezvese mashandisiro atakaisa uye huwandu hwemifananidzo kana mavhidhiyo atinogona kutora, zvisinei nemhando yevhidhiyo yatinoshandisa. Nekudaro, ivo vashandisi vanoenderera ne 16 GB iPhone kana iPad vanoramba vachitambura nekushayikwa kwenzvimbo kusvikira vagona kumutsiridza chishandiso chavo.
Kana iwe uchida kuziva yakawanda sei nzvimbo yemahara yaunayo pane iyo iPhone kana iPad, iwe unofanirwa kuita anotevera matanho:
Pazasi isu tine nzira mbiri dzekuziva kuti ndeipi nzvimbo yemahara yeyedu mudziyo:
Kuburikidza nesarudzo IPhone chengetedzo. Ichi chikamu chichatiratidzawo saizi yeese mafomu ekushandisa atakaisa pakombuta yedu, ichiva sarudzo yakanakisa yekutarisa nzvimbo nekuti inotibvumira kubvisa kunyorera kunotora nzvimbo zhinji kana kuti hatisisiri kufarira kushandisa .
Kubudikidza Mashoko. Kuburikidza neRuzivo, isu chete tine ruzivo nezve iyo yemahara nzvimbo yeyedu kifaa. Iyo inotiratidzawo huwandu hwehuwandu hwekushandisa hwakaiswa pakombuta yedu pamwe nenzvimbo yekuchengetera yechigadzirwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 12 » Maitiro ekuziva kuti yakawanda sei yemahara nzvimbo yandinayo pane iyo iPhone
Yekutanga base iPhone (EDGE) modhi yaive ne4GB, kwete 16GB sekutaura kwechinyorwa.
Iko kusarudzika kwekusarudzika kwevakanyanya kuteerera podcast kunosimbiswa
Chiitiko chekuratidzira cheiyo iPad nyowani chicha shambadzirwa chaiko